आज कार्तिक १२ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / राशिफल / आज कार्तिक १२ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 29, 2021 राशिफल Leaveacomment 138 Views
तपाईमा भावुकता अधिक मात्रामा रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यको कारणले निकै चिन्तित हुनुहुनेछ। तपाईको आत्मसम्मानमा चोट लाग्न सक्छ। तपाईं दोषी महसुस गर्नुहुनेछ। खानपिन र निद्रामा अनियमितता रहनेछ। विधार्थीको लागि मध्यम समय छ।
तपाईको चिन्ता कम हुँदा निकै राहत महसुस हुन्छ। तपाईं धेरै भावुक र संवेदनशील हुनुहुनेछ। साहित्य र कलाको क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्नुहुनेछ। परिवारको सदस्य विशेष गरी आमासँग आत्मीयता बढ्नेछ। आर्थिक मामिलामा ध्यान दिनेछ।
निर्धारित कार्य पूरा हुनेछ। जसकारण तपाई निकै खुसी हुनुहुनेछ। आर्थिक योजनाको कारण तपाईको समस्याहरू कम हुनेछ। व्यवसायमा सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र प्रियजनसँगको भेटघाटले खुशी रहनुहुन्छ।
तपाई अदालतको मामिलाबाट टाढा रहनुहोला। मनमा अशान्ति रहनेछ र विभिन्न चिन्ताले सताउनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। तपाई निकै भावुक रहनुहुनेछ। खर्चको मात्रा बढी हुनेछ ।
विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति, कीर्ति र लाभ मिल्नेछ। तपाईमा लक्ष्मीजीको आशीर्वाद रहनेछ। भ्रमणमा जानु हुनेछ। श्रीमती र छोराछोरीसँग राम्रो समय बित्नेछ। दाम्पत्यजीवनमा आनन्द समय बित्नेछ। सन्तानको समाचार मिल्नेछ ।
तपाई घर र कार्यस्थलमा राम्रो वातावरणको कारण धेरै खुशी हुनु हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। पदोन्नतिको अवसर छ। कार्यालयको उच्च अधिकारीले तपाईंको कामको प्रशंसा गर्नेछन्। परिवारमा खुशीको वातावरण रहनेछ। माताको पक्षबाट लाभ मिल्नेछ ।
शारीरिक र मानसिक रूपमा थकान र आलस्य अनुभव गर्नुहुनेछ। जसकारण उत्साहको कमी रहनेछ। उच्च अधिकारीको व्यवहार तपाईप्रति नकारात्मक रहनेछ। छोराछोरीसँग मतभेद हुन सक्छ। कुनै महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित गर्नु लाभदायक हुनेछ।
कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। तपाई चिन्तित रहनुहुन्छ। पानीबाट टाढा रहनुहोला । अचानक कुनै रोगले सताउन सक्छ। खर्च बढ्नेछ। बोली र व्यवहारमा संयम राख्नु आवश्यक छ।
दैनिक काम बाहेक मनोरञ्जन र भेटघाटमा समय बित्नेछ। विपरीत लिङ्गीय साथीभाइसँग राम्रो समय बित्नेछ। तपाईंको व्यापार बढ्नेछ। सहभागिता लाभदायक हुनेछ। सार्वजनिक जीवनमा मान सम्मान बढ्नेछ।
काममा सफलता पाउनको लागि दिन उत्तम रहला । परिवारमा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहनेछ। तपाईं शरीर र दिमागबाट ताजा र ऊर्जावान महसुस गर्नुहुनेछ। आमाको परिवारबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। खर्च बढ्नेछ।
साहित्य निर्माणको लागि दिन शुभ रहला। विद्यार्थीले पढाइमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्। तपाईंको स्वभावमा भावुकता र कामुकता बढी रहनेछ। मनमा भय रहनेछ । मानसिक सन्तुलन कायम राख्नुहोला । प्रेमी प्रेमिकाको लागि दिन अनुकूल छ।
Previous शरीरमा देखिएका यी लक्षण हुन् छिटो मृ’त्युको चेता’वनी चिन्ह, कतै तपाईलाई त देखिएको छैन ?
Next दाँतको रोगी हुनबाट बच्न के गर्ने ?